ऋणबाट छुटकारा पाउन यी वृक्षको साहारा लिनुहोस् ! जानी राखौ « Online Tv Nepal
ऋणबाट छुटकारा पाउन यी वृक्षको साहारा लिनुहोस् ! जानी राखौ
Published : 20 March, 2020 8:08 pm
ऋणमा डुबेका मानिसहरु ऋणबाट मुक्त हुन चाहेकै हुन्छन् । धेरैले आफुलाई आर्थिक समस्या पर्दा ऋण लिने गर्छन् । तर उक्त ऋण समयमा फिर्ता गर्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ । ऋण तिर्ने समयमा विभिन्न समस्याले गर्दा तिर्न मुस्कील पर्ने गर्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार उचित बार र नक्षत्रमा ऋण लिएको छैन भने त्यो ऋण तिर्न निकै कठिन हुने गर्छ ।